स्वास्थ्य टिप्स : ब्लड प्रेसर लो भएमा अपनाउनु पर्ने उपायहरु ! – Shirish News
स्वास्थ्य टिप्स : ब्लड प्रेसर लो भएमा अपनाउनु पर्ने उपायहरु !
एजेन्सी। उच्च रक्तचाप भएजस्तै कतिपयलाई ब्लड प्रेसर लो हुने गर्छ । रक्तचाप न्यून भएका बिरामीहरुलाई पनि समान हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्नेमा धेरैलाई थाह नहुन सक्छ ।